Sida loo Abuuro Custom ArchLinux Repos si Guriga Loogu Qaado | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Qaybinta, GNU / Linux, Shabakado / Adeeg, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Horaan u sharaxnay kahor sida loo sameeyo keyd yar ama keyd gaar ah Debian / UbuntuHagaag, waa markiisa Archlinux sidoo kale 😀
Ka soo qaad inaan haysanno xaalada soo socota ...
Waxaan ku haysannaa kombuyuutar guriga, gurigana kuma lihin internet.
Xafiiska waxaan ku leenahay internet.
Waxa aan sameyn doonno ayaa ah inaan ku keydinno bakhaar yar oo xirmooyinka aan ka soo dejisannay xafiiska, in repo-gaas uu guriga ku qaato oo uu awoodo inuu ku rakibo codsiyada guriga, xitaa marka aynaan internet lahayn.
Taas awgeed, kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee xafiiskayaga waxaan ku sameyn doonnaa waxyaabaha soo socda:
Waxaan ka abuuri doonnaa galka cusub GURigeena.
Waxaan nuqulan doonaa dhammaan xirmooyinka aan soo dejisanay galkaas.
Waxaan ku sameyn doonnaa koob yar oo baakadaha ah.
Iyo ... bilaabida hab cusub oo aan ku tuso casharro ku saabsan terminaalka, halkan waa bannaan-baxa HAHA:
Diyaar, waxaan haynaa bakhaarkii ugu yaraa ee la qabtay, hadda waxaan u qorsheynaynaa inaan dib u habeyn ku sameyno kombuyuutarradeena kale:
Sida aad u aragto ... quruxsan fudud oo dhan sax? 😀
Mana u maleynayo inay jiraan wax kale oo lagu daro, kaliya sax weyn?
Mar dambe cudurdaar ma haysanno, iyada oo aan loo eegin annaga oo aan internetka ku haysan guriga, waan rakibi karnaa Archlinux ????
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Sida loo abuuro meel gaar ah ArchLinux repos si guriga loogu qaado
gabriel ivan dijo
Waan ku salaamayaa qof kasta oo aan su'aal qabo, maxaa dhacaya haddii aan tirtiro qafiska 'pacman'? dib uma soo ceshan kartaa dhammaan faylashaas si aad ugu haysato koobkan yar-yar? Mise waxay ahayd inaan markale wax walba soo dejiyo oo aanan tirtirin wax hahaha isbedelka salaanta iyo mahadsanid shaqadaada !!
Ku jawaab Gabriel Ivan
Nadiifinta khasnadda waa inaysan shaqo ku lahayn.
Sidan oo kale .db ee repo-ga yar lama sameeyo / lama abuurin iyadoo la koobiyeeynayo .db keydka pacman, laakiin waxaa lagu abuuray waqtigaas tallaabada repo-add.
Uguyaraan taasi waa sida ay umuuqato 🙂
Tito Seguin dijo
Hagaag, waan ka xumahay laakiin waad khaldantahay, haddii aad tirtirto keydka pacman, oo aan inta badan sameeyo; galka gabi ahaanba wuu madhnaan doonaa
Jawaab Tito Seguín
Haddii aad u jeeddo kaydka faylka, haa, sida iska cad haddii aad tirtirto / var / cache / pacman / pkg / * tani ma shaqeyn doonto, laakiin haddii aad tirtirto keydka kaydka (kuwa .db ka ah) way shaqeyn doontaa.
EasyLife: Fedora weligeed sidan uma fududaan